Faransiiska oo ka carooday magaalo haweenka Muslimiinta u oggolaatay inay diintooda ku dhaqmaan | Xaysimo
Home War Faransiiska oo ka carooday magaalo haweenka Muslimiinta u oggolaatay inay diintooda ku...
Faransiiska oo ka carooday magaalo haweenka Muslimiinta u oggolaatay inay diintooda ku dhaqmaan
Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa shalay sheegay inuu isbeddel ku sameyn doono sharci ay dejisteen maamulka magaalada Grenoble kaas oo haweenka u oggolaanaya inay xirtaan dharka xijaaban ee haweenka Muslimiinta ah ay ku dabaashaan.
Dharkan oo ah nooca isku wada xiran madaxa ilaa lugaha, ayaa waxaa isticmaala haweenka Muslimiinta ah qaarkood si ay ugu daboolaan jirkooda, balse waa arrin lagu muransan yahay oo ka taagan Faransiiska iyadoo dadka ka soo horjeedana ay u arkaan wax lagu curyaaminayo Islaamnimada.
Magaaladan Grenoble ayaa Isniintii beddeshay shuruucdeeda dabaasha iyadoo oggolaatay dhammaanba noocyada dharka lagu qubeysto, si ana loogu soo koobin dharka gaagaaban ee markii hore loo oggolaa haweenka iyo ragga.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa isbeddelkaas ku tilmaamay “daandaansi aan la aqbali karin” isla markaana “meel ka dhac ku ah qiyamka dalkaas”, isagoo intaas ku daray inuu codsaday inuu maxkamad la tiigsado shuruucda cusub.
Sharciga cusub ee sanadkii hore uu ansixiyay baarlamaanka Faransiiska ee ku saabsan la dagaallanka “goonni ugu doodidda Islaamka” ayaa wuxuu dhigayaa in dowladdu ay dood ka keeni karto go’aamada ay uga shakiso inay wiiqayaan dhaqamada cilmaaniga ah ee adag ee dalkaas kuwaas oo looga gol leeyahya kala saaridda diinta iyo dalka.
Waxaa socda isku dayo ay sameeyeen dhowr duq magaalo oo koofurta dalkaas ah oo lagu mamnuucayay dharkan oo lagu magacaabo burkini ee xeebaha Mediterranean-ka xilliyada xagaaga. Arrintan ayaase mar walba laga hor imaan jiray iyadoo loo arko mid takoor ku saleysan.
Duqa magaalada Grenoble, Eric Piolle, oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan dalkaas, ayaa tallaabada magaalada ku tilmaamay mid guul leh. “Dhammaan waxa aan dooneyno waa in haweenka iyo ragga ay awoodaan inay u lebistaan sida ay doonayaan,” ayuu Piolle Isniintii u sheegay warbaahinta RMC.
Madaxa xisbiga EELV, Julien Bayou, ayaa ku dooday in go’aanku uusan wax shaqo ah ku lahayn shuruucda cilmaaniyadda, oo dhigeysa in dhexdhexaad laga noqdo arrimaha diinta balse uu damaanad qaadayo xuquuqda shacabka si ay si xor ah ugu dhaqmaan diintooda.
Dharkan Burkinis mamnuuc kama aha meelaha lagu dabaasho ee ay dowladdu maamusho sababo la xiriira diinta, balse waa sababo la xiriira faya-dhowrka, iyadoo dadka dabaalanaya aysan qasab ku ahayn inay qariyaan diintooda marka ay dabaalanayaan.
“Waxaan doonayaa in haweenka Muslimiinta ah ay awoodaan inay ku dhaqmaan diintooda, amaba beddelaan, amaba aysan rumeyn, waxaana jeclaan lahaa inay awood u yeeshaan inay soo dabaashaan,” ayuu intaas raaciyay. “Waxaan sidoo kale doonayaa inuusan dhib badan ka soo gaarin hal qaab u labisashada.”
Grenoble ma aha magaaladii ugu horreysay ee Faransiis ah ee beddesha shuruucdeeda. Magaalada waqooyi-galbeed dalkaas ku taalla ee Rennes ayaa si qarsoodi ah wax uga beddeshay shuruucdeeda dabaasha sanadkii 2019 si loo oggolaado sharka burkinis iyo noocyada kale ee dharka dabaasha.
Arrinta xijaabka lagu xirto madaxa, ayaa sanado badan ahaa mid lagu kala qeybsanaa guud ahaan dalalka Yurub, gaar ahaan sida ay Muslimiinta is dhexgal u sameyn karaan.